Al-Shabaab oo 60 carruur ah ka afduubtay gobolka Bakool - Halbeeg News
Al-Shabaab oo 60 carruur ah ka afduubtay gobolka Bakool
XUDUR (HALBEEG)- Wararka naga soo gaaraya goboolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaalayahannad ururka al-Shabaab ay tuulada Ceel-garas ka afduubteen carruur wax ka baraneysay dugsi Quraan ku yaalla deegaankaas. Al-Shabaab ayaa waayihii dambe waday howl gallo ay ku askareynayaan carruur fara badan kuwaas oo ay ugu tala galeen in ay iyaga u dagaallamaan.
Wararka ayaa sheegaya in maliishiyaadkan oo si aad ah u hubeysan ay gudaha usoo galeen tuulada Ceel-garas oo 40 kiilo mitir u jirta magaalada Tiyeeglow halkaas oo uu ka dhacay falka afduubka ah.
Guddoomiyaha degmada Tiyeeglow Maxamed Cabdifataax Food-cadde ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dhacdadaas, isagoo sheegay in tirada caruurta la afduubtay ay tahay 60 cunug oo ay doonayaan al-Shabaab in ay askareeyaan. Al-Shabaab ayaa dhowr mar oo hore ku amray odayaasha deegaanka iyo macallimiinta dugsiyada in ay soo diiwaan-galiyaan boqollaal carruur ah oo ka qeyb qaadata dagaallada.
Sanadkii aannu soo dhaafnay qoraal ay soo saartay hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, ayay kooxda al-Shabaab ku eedeysay in ay si gaar ah u beegsato carruurta yar yar. Human Rights Warch ayaa ururku ku eedeysay in uu tobankii sano ee la soo dhaafay askareeyay kumannaan carruur ah laga qeybgaliyay dagaallo badan.
Dibad-baxayaal xannibay isusocdkii Jabuuti iyo Itoobiya
Golaha Shacabka oo ka doodaya sharciyada Bangiga Dhexe iyo Hanti-dhowrka